Buuhoodle: Kaaraha Kalshaale mise Koofiyadda Jeegaanta??? | Qaran News
Buuhoodle: Kaaraha Kalshaale mise Koofiyadda Jeegaanta???
Writen by Qaran News | 12:02 pm 11th Feb, 2018
#Saxarla: Saaka maxaa lagu cawa beryay?
#Saluugla: Belo ma ogin nabadqab baa lagu soo kaakacay.
#Saxarla: Maashaa Allah saaka ma dawladdii Farmaajaa ina aqoonsatay oo wasiir inoo soo dirtay.
#Salguugla: Weger! Armaanu Farmaajo Buuhoodleba aqoon, maxaad saaka maqashay?
#Saxarla: Buuhoodle sidee baanu u maqal saw innaggii toddobaadka dhan u dabaal degeynay markii kal.hore la doortay.
#Saluugla: Dabaaldeggeenu xad ma lehe ma wax kalaad maqashay?
#Saxarla: Waxba ma maqline miyaadan u jeedin magaaladii oo dhammi sawtan dareertay ee la leeyahay wasiir bay soo dhoweyneysaa!
#Saluugla: Alloow nimaan wax ogeyn ha cadaabin. Heedhe iska ammu wasiirku wasiirkaad moodday maahee!
#Saxarla: Oo haddaa ma qoladii Buntilayn ee la lahaa abaabul dagaal bay ku jiraan buu ka socdaa? Iyaba ka dayrin mayno hadday run sheegayaane!
#Saluugla: Heedhe kuwaa cid inaga aadda mooyee cidi inagagama soo noqoto.
#Saxarla: Oo heedhe anigu yaabaye ma qoladii dhallinyaradii badbaado Khaatumo la baxday baa dib usoo noolaatay.
#Saluugla: Kkkkk Saxarlaay dhallinyaradaa hawshoodu waxay ahayd inay odaygii Cali Khaliif ay Buuhoodle ka saaraan, qorshe uga danbeeyaa intaa ma jirin. Magacooda iyo muuqooda toonna miyaad dib u maqashay?
#Saxarla: Oo haddaa yaabay aniguye, ma dhankii Kililkaynu wasiir ku yeelannay haddaa?
#Saluugla: Kililka haddaynu kala nabad galno ayaynu ku buro sidnaa
#Saxarla: Ma annagaa waalan mise Cadan baa laga heesayaa! Magaaladii waatan dhaqaaqdaye wasiirkana ka hor tegeysee, ma wasiir Jinbaa haddaa?
#Saluugla: hhhhh, oo Saxarlaay xogogaal baan ku moodayaye illeyn magaalada waad iska joogtaa.
#Saxarla: Naa heedhe bal ii warran sidee wax u jiraan?
#Saluugla: Wasiirku waa Wasiir Soomaalilayn ka yimid oo reer Buuhoodle ah
#Saxarla: Soomaalilayn? Oo ma waxaad i leedahay arrintu soo dhoweynba maahee waa mudaharaad lagala hortegayo. Heedhe xalay Jimcay ahaydoo anaa saaka iska yara bariistaye ciidamadii ninka celin lahaa ma hiirtii bay baxeen.
#Saluugla: Saxarlaay wallee xaal-moog baad tahay. Miyaadan bandiiraha Soomaalilayn ee derbiyada sudhan u jeedin iyo dhallinyaradan aad wada “jeegaanta” mooddo.
#Saxarla: Oo naa sida loo ba’ay ma wasiir Soomaalilayn ah baynu maanta Buuhoodke ku soo dhoweyneynaa? Oo maxaa Xaglotoosiye godobta looga gelayey haddaa, oo shanta sano dhabarka loogu jeedinayey haddii ragga kaleba la soo dhoweynayo.
#Saluugla: Heedhe ninkani waa Cabdirashiid Ducaale Qanbi oo reer Buuhoodle ah.
#Saxarla: Naa bal yaabkan eega! Oo haddaa ma Xaglotoosiyaan reer Buuhoodle ahayn. Oo illeyn meesha sheekooyin hoosaa ka jirey haddii beryahanba afka la iskula jirey! Ma innagii reer Buuhoodle ahayn baa isu humbaalaynay. Waase wixii laga macaasho “Wallee karis xumeey adna ku wax li’id”
#Saluugla: Inaadeer Xaglatoosiye waad ogatahay inuu ciyaala Dunbulukh yahaye, ma Cabdirashiidkan guriguu ku dhashay soo booqday buu la mid yahay.
#Saxarla: Naa bal yaabkan eega. Waaba la ogaan ninka reer Dunbulukh iyo Suweeto ah. Wallee ama Buuhoodle Buuhoodlay noqon ama waa lagu kala bixi!
#Saluugla: Naa inaadeer “caadi iska dhig” xaalku halkaas ma gaadhine, inanku wuu iska noqonayaaye.
#Saxarla: Anigu caadi baan ahaye “bal idinku is waafajiya Kaarahan aad taallada ka dhigateen iyo soo dhoweynta wasiirka Somalilayn”!
1457 Vistors Online